Alahady 11 Oktobra 2020 :: Alahady STK - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 11 octobre 2020 11 octobre 2020 par Hanitra ROBEL
Alahady 11 Oktobra 2020 :: Alahady STK
Alahady 11 Oktobra 2020. Alahady ankalazaina ny ivombokatry ny sampana tanora kristiana. Alahady hitondrana ambavaka ihany koa ny SP Andrefana noho ny faha 25 taonany. Mbola mibanjina hatrany ny lohahevitra « Mirosoa amin’ny finoana Masina » isika. Nitarika ny fotoana anio ny Rtoa Fy Rakotomalala, mpianatra ho mpitandrina. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ireo mpikambana ao amin’ny STK avokoa, Rtoakely Razafindrakoto Mikanto, Andriamampianina Faneva, Andriamampianina Tsanta. Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny mpianatra ho mpitandrina Ramilison Diamondra.
Taorian’ny feonjavamaneno fidirana dia nanao anjara hira avy hatrany ny STK « Mahagaga ».
Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salama 33 : 12 – 22. Natao ny FFPM 6 : 1, 2. Nanao ny vavaka fisaorana ny mpitarika taorian’izany.
Nisy feon-javamaneo avy hatrany taorian’izay.
Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady
Zoky Rajaonarivelo Yasmina, mpampianatra K7 no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy. Ny bokin’ny Jeremia 33 : 3 « Antsoy aho dia hoavaliako hianao ka hampisehoaka zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao » no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy.
Nisy tantara nentiny natao fanoharana ny amin’ny hafatra nentiny. Na inona manery antsika dia antsoy foana Andriamanitra.
Vavaka no namaranany ny fotoana izay notanterahiny.
Natao ny FFPM 210 : 1, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny.
Vavaka sy vakiteny
Mialoha ny vavaka dia nambara ny perikopa anio dia ny I Samoela 17 : 42-51, Lioka 17 : 1-6, I Korintiana 16 :13-18 ary novakiana izay avy eo.
Natao ny FF 26 : 2, 3 mialoha ny hafatra.
Toriteny sy hafatra
Ny Lioka 17 : 1-6 no nitondrany ny hafatra. Eny andalana hiakatra ho any Jerosaleman Jesoa sy ny mpianatra eto. Fampianarana ny amin’ny fandeferana sy ny finoana no voalaza eto.
Meteza mitombo amin’ny finoana
Raha raisina eto izany dia misy hetaheta lalina tamin’ny Apostoly « Ampitomboy ny finoanay ». Rehefa nandre ny fampianaran’i Jesoa Kristy ny Apostoly dia nahatsiaro fa tsy ampy ny finoana izay efa nananany.
Zava-dehibe ny fahatsapana hoe hatraiza moa ny finoana izay hanananao. Ny fananana hetaheta no dingana voalohany raha te hiroso.
Faharoa dia mila manaiky ny tsy fahatanterahintsika isika ka matoky ny fitiavan’i Kristy.
Nanana finoana miezinezina ireto Apostoly ireto. Nanana tanjona ara-pinoana lehibe izy ireo.
Mila manana hetaheta aloha isika voalohany raha te hanao zavatra tsara ka te hanatratra tanjona. Hetaheta hidera an’Andriamanitra, hiaraka amin’ny tanora.
Tokony manao toy ireto Apostoly ireto isika eo amin’ny fiainantsika izany.
Ny fitomboana amin’ny finoana dia entina miaina ny fitsipi-piainana omen’ny Tompo. Ireto avy izany fitsipi-piainana izany :
Ny mpino dia tsy mpanafintohana olona (Loza ho an’ny olona izay miteraka fanafintohinana)
Ny mpino dia mitaona ny olona hanaraka ny Tompo, ny mpino dia mitandrina ny teny, ny tena, ny mpino dia mitsara ny teniny amin’ny alalan’ny sitrapon’Andriamanitra.
Mila manana fahasahiana isika amin’izao fotoana hatrehintsika izao, mila mivoaka amin’ny fahanginana isika noho ny fahatafintohinana ateraky ny toe-draharaha ankehitriny
Ny mpino dia mananatra ary mamela heloka
Raha mananatra ny rahalahy dia atao amin’ny fahasoavana izany. Ny fanaranana ny olona dia miainga amin’ny tenin’Andriamanitra. Raha manao izany isika dia tsy atao amin’ny fo fotsiny.
Jesoa dia efa nampiantra antsika mba hifamela heloka ihany koa. Ny fepetra napetrany nefa dia misy ny fifonana ary misy ny fanekena izany fifonana izany.
Eo amin’ny fiarahamonina dia misy ny fifamelankeloka tokony ho tanterahina toy ny efa namelan’i Jesoa ny helontsika.
MIrosoa sy mitomboa amin’ny finoana amin’ny fanarahana ny Tompo
Mampisy ny ts misy ny finoanao
Eo amin’ny andininy 6 dia milaza fa na madinika aza ny finoanao dia mety ahavitanao zavatra lehibe izany. Ny Tompo ia mitaky fanetre-tena aminao rehefa manao zavatra hianao. Tsy tokony handeha amin’ny herin’ny tena ny olona iray rehefa manao zavatra.
N’inona angatahina amin’ny anaran’ny Tompo dia tanterahiny izany. Raha mifanaraka amin’ny sitrapony izany dia tanterahiny. Mila mankato sy manana fiombonana aminy isika raha te ho afaka tanteraka.
Tsy voatery hamorona ny tsy misy zay vao hanana finoana.
Ny finoana no hampahiratra indray ny fiainana sy ny fanompona izay tanterahinao.
Tsy tokony hiala sy hampiala ny hafa amin’Andriamanitra ary tokony mangataka fahatokiana amin’Andriamanitra mba ahatontosa sy ahalasa lavitra antsika amin’ny finoana.
Nisy feonjavamano ary nanao ny anjara hira ny STAF « Raha mbola ao ny Tompo ».
Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika taorian’izany.
Taorian’izay dia nanambara ny fanekempinona faharoa ny mpiaramanompo rehetra ary nisy feonjavamaneno nanaraka izany.
Nanao ny tatitry ny tompon’andraikitra, Atoa Rajaonarivelo Nomena no nanao izany. Nilaza ireo asa vita tao anatin’ny herintaona izy. Anisan’izany ny fanaovana ny tafika masina, ny fanatrehana ny fiofanana sy fivoriana foibe, ny fandraisana anjara tamin’ny lalao ara-panatanjahantena.
Nanao anjara hira ny STK « Tehirizo », taorian’ny tatitra.
Nambara ny raharahampiangonana Rtoa Rakotomanana Andry. Ny mpitandrina miana-draharaha eto ankehitriny dia Rtoa Ramilison Diamondra. Anisan’ny voalaza amin’izany ireto manaraka ireto :
Alahady hitondrana ambavaka ny FIFAB anio
Mankalaza ny faha 25 taonan’ny SPAA amin’ity taona ity ka nosokafana omaly izany. « Miorena tsara amin’ny finoana hianareo », izany no lohahevitra napetraka amin’izao 25 taona izao. 10 Oktobra 2021 no ivony ary ny 4 Desambra 21 no famaranana ny fotoana.
Fidirana roa hatrany no misy amin’ity volana Oktobra ity, amin’ny 7 ora sy amin’ny 10 ora. Ny sekoly Alahady dia amin’ny 9 ora hatramin’ny 10 ora. Ny k6 hatramin’ny k10 no manatrika ny fampianarana amin’ny heriny.
Ny fianarana Jaona dia ny Jaona 15 no hitondran’ny mpitandrina ny fampianarana
Antsoina ny mpihevi-draharaha ny Sabotsy 17 oktobra @ 8 ora maraina
Ny rakitra sy voady, adidy dia mitontaly Ar 4 678 300
Filazana Manjo : nodimandry Atoa Randriambololona René, maty ny 6/10 teo amin’ny faha 80 taona
Ny herinandro manaraka dia an’ny SMZM
Hitohy ny fotoampivavahana iarahana amin’ny zokiolona arahina fandraisana ka amin’ny 21 oktobra @ 9 ora maraina no hanatanterahina ny amin’ity volana
Ny zaza Harentsoa Annaëlle Melodia an’i Avo no natolotry ny ray amandreniny tamin’ity Alahady ity. Natao ny hira 480 : 2 natao tamin’izany. NItrotro ambavaka ny fanolorana ny zaza ny Fiangonana.
Namaky avy hatrany ireo voady sy rakipisaorana ny Atoa Razafindrabe John Bam. Ny hira « Misaotra anao izahay » no nisy nangataka voady.
Ho fanolorana ny rakitra dia ny Ffpm 437 : 3
Nisy feonjavamaneno fohy ary niroso avy hatrany tamin’ny vavaka fangatahampitahiana.
Natao ny hira FF 3 mialoha ny filazana ny tondrozotra sy tsodrano ary ny hira Ffpm 621 : 1 kosa no namaranana ny fotoana
Article précédentPrécédent Alahady 04 oktobra 2020
Article suivantSuivant Alahady 11 Oktobra 2020
Alahady 25 Oktobra 2020
Alahady 18 Oktobra 2020
Alahady 11 Oktobra 2020
Alahady 04 oktobra 2020